Kordhinta wax ku oolnimada tignoolajiyada wax soo saarka digriiga baradho-yar - Journal "Nidaamka Baradhada"
Bogga guriga Digest Sayniska Taranka iyo abuur abuurka
в Diirada, Talobixin takhasus leh, Taranka iyo abuur abuurka
Sergey Banadysev, Dhakhtarka Sayniska Beeraha, Doka Gene Technologies LLC
Mintiubers baradhada (MK) waa farcankii ugu horreeyay ee tuberous ee dhirta baradhada nadiifka ah. Helitaanka digriiga yaryar waa sanadka ugu horeeya ee nidaamka abuur baradho ee dhammaan wadamada horumaray wax soo saarka baradhada. Digriiga yaryar ee baradhada waxaa lagu koray oo kaliya xaaladaha dhulka la ilaaliyo, taas oo ka saaraysa khatarta dib-u-qaadista dhirta leh cudurada viral, fangas iyo bakteeriyada (haddii digriiga dhirta nadiifka ah lagu koray dhulka furan, ka dibna aan yar-digriiga la helin sida a natiijada, laakiin jiilka ugu horreeya ee beerta).
Guud ahaan waa la aqbalay in dhexroorka tuber-yar uu ahaado ugu yaraan 10 mm, wax kasta oo ka yar waa tuber-yar.
Baahida loo qabo digriiga yaryar ee wax soo saarka 10 kun oo tan oo ah elite waa: oo leh nidaam shan sano ah oo OS ah iyo ES (wax soo saarka asalka iyo asalka) - 50 kun oo xabbo; oo leh nidaam afar sano ah oo OS ah iyo ES - 400 kun oo xabbo; oo leh nidaam saddex sano ah - 3 milyan oo xabbo.
Xiriirka Ruushka wuxuu leeyahay saldhig cilmiyeed oo adag oo u gaar ah oo ku yaal aaggan. Soo bandhigida baaxadda weyn ee tignoolajiyada ugu casrisan ee sii kordhaya digriiga-yar ee Federation Ruush ah ayaa had iyo jeer la fuliyay ka hor dalalka kale ee horumarinta baradho: sidaas technology substrate waxaa la soo bandhigay 40 sano ka hor, 15 xarumaha biotechnology ayaa ka shaqeeyay; hydroponic - 30 sano ka hor, waxaa isticmaala Doka - Gene Technologies, Dhaqamada Meristematic; aeroponic - horumariyo at All-Ruushka Research Institute of Beeraha Biyotechnoolajiyada (All-Ruushka Research Institute of Beeraha Biotechnology) horraantii 2000-meeyadii, tan iyo 2010 technology this waxaa kor u qaaday Xarunta Baradhada Caalamiga ah oo si firfircoon ugu faafay adduunka oo dhan. Xiriirka Ruushka, dhirta warshadaha ee sii kordhaya digriiga yaryar ayaa la soo saaraa: Geedka Baradhada iyo Meristem. Isla mar ahaantaana, badi ganacsiyada abuur-abuurka gudaha ayaa wali soo saara digriiga yaryar oo tiro yar, gudaha xadka baahida loo qabo qorshe shan sano ah oo lagu helo kuwa sare. Kaliya shirkadda FAT-Agro ayaa gaartay heerka in ka badan 2 milyan oo unug sannadkii, taas oo ku filan in loo beddelo qorshe saddex sano ah.
Kordhinta wax-soo-saarka digriiga yar-yar si loo yareeyo nidaamka wax-soo-saarka abuurka, korna loogu qaado tayada wax-soo-saarka ayaa ah hab istiraatiiji ah oo lagu horumarinayo wax-soo-saarka baradhada. Iyadoo aragtidan maskaxda lagu hayo, isku dayo badan ayaa la sameeyay sannadihii la soo dhaafay si loo hagaajiyo farsamooyinka wax-beerashada. Hadafka ugu weyn ee hal-abuurnimada waa in la helo digriiga yaryar ee ugu badan ee suurtogalka ah warshad kasta oo ku jirta vitro iyo aag kasta oo aqalka dhirta lagu koriyo ah. Si loo gaaro, habab badan oo wax-soo-saarka dalagga ayaa la isticmaalaa, laakiin dhammaan xalalka la soo jeediyay ee ku salaysan natiijooyinka cilmi-baarista sayniska ayaa bixiya natiijooyinka wax soo saarka warshadaha.
Dhinacyo badan oo wax-soo-saarka minituber-mugga sare ee hufan ayaa ah aqoon-sida. Wax soo saarka Ruushka ee digriiga baradho-yar ayaa had iyo jeer lagu fuliyay saldhigga sayniska iyo tignoolajiyada ugu waxtarka badan uguna horumarsan. Haddana waddanku waxa uu helay teknooloojiyada la adeegsado oo si weyn uga sarreeya heerka adduunka.
Shuruudda aasaasiga ah ee soo saarista tayada leh ee digriiga yaryar waa u hoggaansanaanta xeerarka iyo xeerarka hadda jira. Nidaamka sharciyeynta ee Xiriirka Ruushka ee mawduucan waa la-talin dabiiciga ah, qaanuunka hadda jira ee caddaynta dalagyada beeraha, tusaale ahaan, ma jiro erey ku saabsan xeerarka wax soo saarka iyo caddaynta digriiga baradho-yar. Xaaladdan oo kale, waxaa lagama maarmaan ah in diiradda la saaro waayo-aragnimada caalamiga ah. Dhammaan wadamada horumaray soosaarka abuurka baradhada, shuruudaha qasabka ah ee ururka, tignoolajiyada iyo tayada digriiga yaryar ee la soo saaray ayaa la qaatay, si rasmi ah loo ansixiyay oo si adag loo ilaaliyo.
Shuruudahan waa in lagu saleeyaa shirkadaha gudaha ee ku takhasusay soo saarista digriiga yaryar, qaabka halbeegyada ganacsiga, is-xakamaynta, ilaa inta uu gobolku ka samaynayo qaab-dhismeed rasmi ah oo ku saabsan aaggan. Tusaale ahaan, gudaha Ruushka waxaa jira xeerar loogu talagalay naqshadeynta tignoolajiyada ee dhismayaasha taranka iyo koriyooyinka taranka NTP-APK 1.10.09.001-02. Si kastaba ha ahaatee, horumarinta NTP-da kuma jiraan dukumeentiga qayb ku saabsan sifooyinka qasabka ah ee qaab-dhismeedka loogu talagalay koraya tubers-yar. Oo waxaa jira waxyaabo badan oo noocaas ah, tusaale ahaan: aqalka dhirta lagu koriyo waa inuu leeyahay albaab laba jibbaaran oo leh qolka labiska ee dharka lagu beddelo. Meesha la bedelayo waa in lagu qalabeeyaa suufka cagaha iyo saabuunta gacmaha lagu dhaqo laguna jeermiyo. Albaabada laga soo galo iyo dhammaan meelaha hawo-mareenada waa in lagu daboolaa mesh ilaalinta aphid (xajmiga mesh ugu badnaan 0,5 by 0,9 mm). Qolka waa in si habboon loo xakameeyaa heerkulka iyo qoyaanka (oo ku habboon guri quraarad ah). Dhexdhexaad aan ciidda lahayn waa in loo adeegsadaa la qabsiga dhirta aan nadiifka ahayn. Haddii ciidda/carrada isku dhafka ah la isticmaalo, waa in si habboon loo daweeyaa/simisaa si loo hubiyo maqnaanshaha cudur-sidaha carrada.
Dalagga minituber waa in laga helaa microplants si rasmi ah loo xaqiijiyay ama microtubers oo ku koray jawi aseptic ah oo ka soo baxa unugga meeraha ee walxaha isha, oo lagu tijaabiyo maqnaanshaha fayrasyada, fayrasyada iyo bakteeriyada caabuqa baradhada ee shaybaarka baaritaanka saxda ah ee la aqoonsan yahay.
Hababka, nidaamka, inta jeer ee tijaabinta tayada alaabta ee dhammaan heerarka wax soo saarka ee digriiga-yar ayaa si adag loo nidaamiyay.
Macluumaad badan oo la taaban karo ayaa la ururiyey oo ku saabsan hagaajinta borotokoolka faafinta baradhada. Cilmi-baarista aaggan ayaa muujinaysa fursado badan oo lagu hagaajinayo korriinka iyo korriinka dhirta iyadoo lagu saleynayo isbeddellada xoogga iyo saamiga nafaqooyinka. Waxaa la aasaasay in isticmaalka xeeriyeyaasha koritaanka ee dhaqanka meristems baradhada aan loo baahnayn, laakiin ku darida walxaha qaarkood, xitaa kuwa hooseeya, waxay kordhisaa oo ay dardargelisaa wax soo saarka walxaha. Waxaa muhiim ah in la wanaajiyo xaaladaha ka-soo-baxa dhirta baradhada micropropagated iyadoo la isticmaalayo ilo iftiin kala duwan, hababka iftiinka iyo hawo qolka. Iyadoo ay soo ifbaxday nalalka LED-ka, awooddooda ayaa bilaabay in si firfircoon loo barto oo la xidhiidha micropropagation baradhada. Iftiinka iftiinka cas iyo casaanka fog ayaa kordhiya sifooyinka koritaanka; si kastaba ha ahaatee, isku darka casaan + buluug + fog casaan / iftiin cad ayaa saameyn wanaagsan ku leh samaynta tuber-ka iyo ururinta dheef-shiid kiimikaadka aasaasiga ah.
Tiknoolajiyada loogu talagalay digriiga yaryar ee koraya waxay u qaybsan yihiin laba kooxood oo waaweyn: substrate (kala duwanaansho weyn) iyo kuwa aan substrate (dhaqanka biyaha iyo aeroponics). Farsamooyinka ugu muhiimsan ee wax soo saarka tubers-yar: on substrates dabiiciga ah (80% mugga), hydroponic iyo aeroponic. Helitaanka microtubers waxay sidoo kale la xiriirtaa mawduuca MC waxaana si sii kordheysa loogu isticmaalaa taranka tirada badan ee alaabta isha. Farqiga u dhexeeya microtubers iyo minitubers waxay ku jirtaa qaabka dhexdhexaadka ah (microtubers waxaa lagu koray oo kaliya hoostooda nadiifka ah ee xaaladaha vitro iyo minitubers kaliya ee hoos yimaada xaaladaha ex vitro ee la ilaaliyo) iyo cabbirka tuber. Natiijooyinka iyo gabagabada laga helay tijaabooyin la taaban karo xaalado badan uma dhigna qoraallada aragtida ee ku saabsan suurtogalnimada kicinta tuberization ee dhaqanka in vitro. Tani waxay khusaysaa labada cuntooyin, isticmaalka hagayaasha koritaanka, iyo sidoo kale xaaladaha sii kordhaya iyo isticmaalka arrimaha walaaca. Haddii macluumaadka si guud laga heli karo oo ku saabsan xeerarka farsamada ee wax soo saarka ee microtubers ogolaanaya, xaaladaha intooda badan, si aad u hesho halkii natiijo dhexdhexaad ah - ku saabsan ama wax yar ka badan hal microtuber miisaankeedu yahay 200-400 mg halkii geedka, ka dibna hagaajin xirfadeed ee technology ee la xidhiidha gaar ah. xaaladaha wax soo saarku waxay kordhiyaan waxtarka habka mararka qaarkood. Xiriirka Ruushka, waxaa jira aqoon-sida aaggan oo leh wax soo saarka ugu yaraan saddex microtubers oo miisaankoodu ka badan yahay 0,5 g hal warshad oo ku jirta tuubada tijaabada caadiga ah.
Beerashada sanadka oo dhan ee microtubers iyo hagaajinta tayadooda, dhowr naqshadood oo kala duwan oo bioreactors ah ayaa ganacsi ahaan loo soo saaraa adduunka. Nidaamyadan semi-automatic-ka ah waxay kuu oggolaanayaan inaad hoos u dhigto hab-socodka degdegga ah ee buug-gacmeedka oo sidaas darteed kordhinta wax-soo-saarka iyo dhimista kharashka wax-soo-saarka. Dhirta yaryar ee laga helo bioreactors waxay leeyihiin tiro aad u weyn iyo dhexroor ka weyn. Tignoolajiyada ugu dambeeyay ee aaggan waa horumarinta saynisyahannada Japan iyo naqshadeeyayaasha.
Nidaamka wax-soo-saarka microtuber-ga ballaaran ee isticmaalaya bacaha dhaqanka caaga ah ayaa si guul leh u soo saara inta u dhaxaysa 100 iyo 300 microtubers halkii bac, taas oo ku xidhan noocyada kala duwan. Beddelidda xoojinta nafaqooyinka marka la eego maadada hoose ee sukrose, nitrogen, kordhinta heerka fosfatka potassium ee dhexdhexaadka ah ayaa suurtogalisay in la kordhiyo tirada guud iyo celceliska miisaanka microtubers. Tiknoolajiyada Jabbaan waxay u oggolaaneysaa soo saarista 250 microtubers sanadkii (saddex wareeg oo dalagga) qolka beerashada 000 m2. iyo 80% microtubers-ka la helay tignoolajiyadan waxay leeyihiin tiro ka badan 1 g, i.e. ku habboon in si toos ah loogu beero beerta.
Dunida oo dhan, wax soo saarka tubers-yar ee substrates dabiiciga ah ayaa ku guulaysta. Farsamadan, in kasta oo si fiican loo aasaasay, haddana si weyn ayaa loo horumarin karaa. Genotype, muddada iyo xaaladaha beeritaanka vitro, cabbirka dhirta, soo-gaadhista nafaqooyinka iyo xakamaynta koritaanka ayaa si muuqata u saameeya wax soo saarka minitubers. Da'da iyo ka-hor-daweynta geedo inta lagu jiro beerto, xaaladaha iyo muddada qallafsanaan, xilliga beeritaanka iyo koritaanka, Halabuurka deegaanka ciidda, habka beeritaanka, cufnaanta meelaynta dhirta, qiyaasta bacriminta, iyo iftiinka ayaa sidoo kale saameeya. xoogga wax soo saarka-yar-tuber.
Maaddooyin badan oo dabiici ah iyo qalab ayaa ku habboon sidii dhexdhexaad ah oo loogu talagalay digriiga yar-yar ee baradhada. Qaybta ugu muhiimsan ee substrate-ka aqalka dhirta lagu koriyo waa dhaqan ahaan peat. Maaddooyinka kale - sida perlite, vermiculite iyo vermicompost - ayaa sidoo kale helay caan dhawaanahan sababtoo ah hawo la aqbali karo iyo awoodda biyaha.
Xaaladaha intooda badan, marka koraya mini-digriiga ee dhaqanka substrate ah, waxaa lagama maarmaan ah in la codsado macro- iyo microfertilizers. Xirfadlayaasha takhasuska leh, tignoolajiyada adeegsata waraabinta xilliyeed iyo bacriminta substrate-ka madhalayska ah ee nafaqooyinka waxaa loo yaqaan hydroponics. Tignoolajiyada Hydroponic ee sii koraya digriiga baradhada yar-yar waxay leeyihiin noocyo isticmaalaya substrates aan shaqaynayn (ciid, jilif geed, qumbaha, iwm) iyo dhaqanka biyaha saafiga ah (filim nafaqo khafiif ah).
Dhammaan qodobbada aragtida nafaqada baradhada ee la xidhiidha suurtogalnimada xakamaynta tuberization ayaa sidoo kale lagu dabaqi karaa beerashada hydroponic, laakiin waxaa jira fahamka baahida loo qabo isbeddel weyn oo ku saabsan xoojinta iyo saamiga nafaqooyinka kala duwanaansho kasta iyo marxalado kala duwan. koritaanka dhirta, bilaabista tuberization iyo koritaanka digriiga dhirta. Halabuurka xalinta nafaqeynta ayaa lagu bixiyaa daabacadaha badankood. Isla mar ahaantaana, tirada digriiga laga helay geedka iyo aagga cutubku way kala duwan yihiin dhowr jeer. Ilaa hadda sida hagaajinta la beegsaday ee xalka nafaqeynta in si qoto dheer loo kordhiyo tirada digriiga (iyo tani waa si sax ah faa'iidada hydroponics) waxaa jira macluumaad aad u yar oo furan. Sanadihii la soo dhaafay, kaliya dhowr daabacaad ayaa la daabacay iyada oo aan la tixraacin halabuurka caanka ah ee sanadihii hore, laakiin leh qalab asal ah.
Tiknoolajiyada ugu casrisan - aeroponic - tignoolajiyada sii koraya ee tubers-yar ayaa leh tiro astaamo aasaasi ah. Ilaa hadda, dhammaan marxaladihii is-daba-joogga ahaa ee hirgelintiisa waa laga soo shaqeeyay, laakiin cilmi-baadhista sahaminta ayaa sii socota. Qiimaha gaarka ah ee macluumaadka tignoolajiyada aeroponics waa in ay muujiso jihada horumarka minituber ee adduunka oo dhan maanta. Horumarkaani waa kuwo lagu dabaqi karo ama waxaa lagu qabsan karaa teknoolojiyadda kale ee koraya tubers-yar.
Doorashada tignoolajiyada wax soo saarka tubers-yar ee shuruudaha gaarka ah waa in lagu saleeyaa falanqaynta tilmaamayaasha wax-soo-saarka, heerka khatarta, baahida ilaha shaqada, isbarbardhigga kharashka maalgashiga, kharashka iyo faa'iidada. Farsamo kastaa waxay leedahay doorashooyin iyo isbedbedel mug leh oo waxtarka wax soo saarka taasoo ku xidhan arrimo badan. Dhammaan tignoolajiyada ayaa isticmaala waxayna ku saleysan yihiin walxo warshadeed oo ka yimid dhaqan nadiif ah ama microtubers. Marxaladani waxay ku dhowdahay mid caalami ah, waxaa loo tixgelin karaa heer. Tiknoolajiyada aad u koraysa ee digriiga yaryar, waa inaad ka doorataa tiro badan oo doorsoomayaal ah.
Inta badan shirkadaha abuur ee waaweyn ayaa hadda ku koraan digriiga yar-yar ee galaaska ama filimada lagu koriyo ee ciidda on substrates organo-macdanta dabiiciga ah oo leh isticmaalka ballaaran ee peat. Farsamadan ayaa leh qiimaha ugu hooseeya ee tuber-yar. Sida caadiga ah, hal dalagga ayaa la beeraa sannadkii. Yurub dhexdeeda, waxaa loo arkaa inay caadi tahay in la helo 4-5 digriiga hal geed. Codsiga kala duwan ee microfertilizers, walxaha noolaha firfircoon, PPP waxay u oggolaaneysaa inay kordhiso isku dhufashada ilaa 8-10.
Doodaha u heelan bioreactor-ka ayaa ah dhalmo-dhalaysnimo, dhalidda ugu badan ee digriiga yar-yar halkii unug. Faa'iido darrada bioreactor waa baahida loo qabo tiro badan oo dhir ah, xajmiga yar ee digriiga, dhibaatada bislaanshaha iyo beeritaanka mechanized ee beerta.
Faa'iidooyinka hydroponics waa wax-soo-saarka, suurtagalnimada dhabta ah ee kicinta tuberization, qalabka warshadaha; Qasaarooyinka - horumarinta liidata ee nidaamka xididka, halista infekshanka ku faafo xalka nafaqeynta, shaqada. Aeroponics waxay u baahan tahay meel bannaan oo dheeraad ah iyo hooska dhamaystiran ee nidaamka xididka, sababtoo ah horumarinta wanaagsan iyo sahayda hawada, digriiga badan ayaa la samayn karaa marka la barbardhigo hydroponics. Si kastaba ha ahaatee, tignoolajiyada hawada ayaa ah tan ugu baahida badan, korontada waa in aan la joojin wax ka badan nus saac.
Dib u eegis kooban ayaa muujinaysa in horumarinta nidaamka saddexda sano ah ee wax soo saarka baradhada caanka ah iyadoo la adeegsanayo tiro badan oo digriiga yar yar ay tahay mid dhab ah. Kordhinta mugga iyo xoojinta wax-soo-saarka ayaa lagu gaaraa iyadoo la helayo tirada ugu badan ee digriiga-yar-yar ee aagga cutubka oo leh tirada ugu yar ee dhirta bilowga ah. Ciidda daboolan iyo walxaha isha ayaa qaali ah, sidaa darteed helitaanka kaliya 2-3 digriiga hal warshad waa ikhtiyaar aan rajo lahayn, inkasta oo mugga ugu weyn ee digriiga yar-yar ee adduunka wali lagu soo saaro habkan. Iyada oo tignoolajiyada substrate-ka, heerka dhabta ah ee wax soo saarka ayaa lagu qiyaasaa iyadoo loo eegayo xuduudaha soo socda: caadiga ah - 100 xabbadood / m2, wanaagsan - 200 xabo/m2; sare - 300 xabo / m2 xilliga koritaanka. Tignoolajiyada Hydroponic waxay awood u leedahay inay soo saarto 500 oo digriiga yar yar, aeroponic - 1000 mini-digriiga sq. m. ee goobta rakibaadda xilliga koritaanka. Tixraac: Qiimaha tas-hiilaadka beeraha ee tignoolajiyada substrate-ka ee 2021 wuxuu ahaa 50 kun oo rubi. halkii mitir oo laba jibbaaran, loogu talagalay hydroponic - 100 kun oo rubles, aeroponics - 150 kun oo rubles.
Dhibaatada ugu weyn ee digriiga-yar-yar ee gudaha ku koraya waa in la gaaro isku-darka horumarinta daaqsinka ee firfircoon iyo samaynta tuber degdeg ah. Waxaa suurtagal ah in la kordhiyo xoojinta tuberization iyada oo la wanaajinayo microclimate (heerkulka, qoyaanka, photoperiod), hagaajinta nafaqada macdanta; Isticmaalka kiciyeyaasha tuberization, xaddidaadda koritaanka daaqsinka. Isla mar ahaantaana, helitaanka digriiga-yar-yar ee mugga waaweyn waa hawl abaabul iyo teknoloji oo adag. Nuances of beerashada degdega ah ee tubers-yar waxay ahaayeen macluumaad ganacsi in ka badan 20 sano. Ma jiraan xeerar xirfadeed oo ka jira qaybta dadweynaha, tani waa aqoonta ganacsi kasta oo gaar ah.
Rubuca labaad ee 2022, buugga "Tuber Baradhada Mini" ayaa la daabici doonaa, isagoo soo bandhigaya lana falanqeyn doona macluumaadka sayniska iyo ganacsiga ee la heli karo ee mowduuca, iyo iyadoo xoogga la saarayo habab wax ku ool ah oo lagu kordhinayo xoojinta wax soo saarka tuber-yar. Mugga macluumaadku waxa uu ka badan yahay 400 bogag. Buuga waxa la heli karaa oo keliya is-diiwaangelinta U dir codsiyada: s.banadysev@dokagene.ru
Tags: "Doka - Farsamada Hidde-yada"wax soo saarka ee tubers-yar oo baradho ah
ShareShare45Share34Si aad u soo diri
Baradhada Tambov waxay qorsheynayaan inay kor ugu qaadaan silsilada tafaariiqda
Hadda way u fududahay alaabada beeraha inay galaan "Magnet"